Ulusu lokuKhanyisa ulusu
Igama lesiqhelo: hydroquinone
Ifomu yesisindo: cream
Udidi lweziyobisi: Iiarhente zokuhambisa ngokwasekhaya
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJan 22, 2021.
UKUSETYENZISWA NGAPHANDLE KUPHELA
Obagi® Ulusu lokuKhanyisa ulusu
(IHydroquinone USP, 4%)
Ikrimu yokuCoca ulusu
Igrama nganye yeComputer Lighting Complex iqulethe i-Hydroquinone USP 40 mg / g kwisiseko se-Ascorbic Acid, BHT, Cetyl Alcohol, Disodium EDTA, Glycerin, Lactic Acid, Methylparaben, Phenyl Trimethicone, PPG-2 Myristyl Ether Propionate, Propylparaben, Saponins ILauryl Sulfate, iSodium Metabisulfite, i-TEA-Salicylate, iTocopheryl Acetate kunye naManzi.
Yintoni i-cbd gummies
Inkcazo yokuKhanyisa kwesikhumba
IHydroquinone yi-1,4-benzenediol. Iyeza linyibilika ngokukhululekileyo emanzini nasetywaleni. Ngokwemichiza, ihydroquinone ichongwe njenge-p-dihydroxybenzene; ifomula yobungqina nguC6H6OKANYE2; ubunzima beemolekyuli yi-110.11 g / mol. Ulwakhiwo lweekhemikhali lukwisazobe esingezantsi.
Ulusu lokuKhanyisa ulusu-i-Clinical Pharmacology
Ukusetyenziswa kwesihloko sehydroquinone kuvelisa ukubuyela umva kwesikhumba ngokuthintela i-enzymatic oxidation ye-tyrosine ukuya kwi-3,4-dihydroxyphenylalanine (dopa) kunye noxinzelelo kwezinye iinkqubo ze-melanocyte metabolic.
Ukuboniswa kukukhanya kwelanga okanye ukukhanya kwe-ultraviolet kuya kubangela ukuba ubume beendawo ezifakwe iblitshi, ezinokuthi zithintelwe ngokusetyenziswa kweearhente zokuthintela ilanga okanye iiarhente zokuthintela ilanga.
Izibonakaliso kunye nokuSetyenziswa kweComplex Lightning Complex
Ukuphuma kancinci kancinci kweemeko zesikhumba ezi-hyperpigmented ezifana ne-chloasma, i-melasma, i-freckles, i-senile lentigines, kunye nezinye iindawo ezingafunekiyo ze-melanin hyperpigmentation.
Abantu abanembali yobuntununtunu okanye ukungavumi ukuyifumana le mveliso okanye naziphi na izithako zayo akufuneki bayisebenzise. Ukhuseleko lokusetyenziswa kwesihloko sehydroquinone ngexesha lokukhulelwa okanye ebantwaneni (iminyaka eli-12 nangaphantsi) alukamiselwa.
Ulusu lokuKhanyisa ukuKhanya kwesisombululo kunye noLawulo
Isicelo esincinci kufuneka sifakwe kwindawo yesifuba nentamo kabini yonke imihla okanye njengokuyalelwa ngugqirha. Ukuba akukho phuculo lubonakalayo emva kweeveki eziyi-8 ukuya ku-12 zonyango, ukusetyenziswa kwale mveliso kufuneka kuyekwe. Ukuvezwa lilanga kufuneka kuthintelwe ngokusebenzisa iarhente yokuthintela ilanga, iarhente yokuthintela ilanga, okanye impahla ekhuselayo yokugubungela ulusu olumdaka xa usebenzisa nasemva kokusebenzisa le mveliso ukunqanda ukuphindaphinda.
ipilisi ye-viagra yamadoda
IHydroquinone sisixhobo esimnyama solusu, esinokuthi sivelise izithambiso ezingafunekiyo ukuba asisetyenziswanga njengoko kuyalelwe. Ugqirha kufuneka aqhele imixholo yolu fakelo ngaphambi kokumisela okanye ukuhambisa eli yeza.
Vavanya ubuntununtunu bolusu ngaphambi kokusebenzisa ngokufaka isixa esincinci kwisiqwenga sesikhumba esingophukanga kwaye ujonge ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ubomvu obuncinci asiyiyo inkcaso, kodwa apho kukho ukurhawuzelela okanye ukwakheka kwe-vesicle okanye ukuphendula okugqithisileyo okuvuthayo, imveliso kufuneka iyekwe kwaye kuboniswane nodokotela. Vala ukongamela isigulana kuyacetyiswa.
Gwema ukudibana namehlo, impumlo, umlomo, okanye imilebe. Kwimeko yokudibana ngengozi, isigulana kufuneka sihlambe amehlo, impumlo, umlomo, okanye imilebe ngamanzi kwaye sinxibelelane nogqirha.
Ukusetyenziswa kwe-sunscreen yinto ebalulekileyo kunyango lwehydroquinone kuba nokuba ukukhanya kwelanga okuncinci kugcina imisebenzi ye-melanocytic.
Ascorbic Acid, BHT, Cetyl Alcohol, Disodium EDTA, Glycerin, Lactic Acid, Methylparaben, Phenyl Trimethicone, PPG-2 Myristyl Ether Propionate, Propylparaben, Saponins, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Metabisulfite, TEA-Acicylate
INQUNUNU YOKUBONISA IPhaneli
Isifuba kunye neNtamo
Ihydroquinone USP, 4%
Uhlobo lweMveliso INKCAZELO YABANTU ILELAYIBHILE YEZIYOBISI Ikhowudi yento (Umthombo) I-NDC: 62032-120
IHYDROQUINONE (IHYDROQUINONE) IHYDROQUINONE 40 mg kwi-1 g
1 I-NDC: 62032-120-60 I-57 g kwi-1 TUBE
IZIYOBISI EZINGENAKUPHUNYELWA 01/12/2010
Umlebheli -Imveliso yeObagi Medical, Inc. (790553353)
IPureTek Corporation 785961046 UMBONO
Imveliso yObagi Medical, Inc.
unika njani im im shot
Isilinganisi se-carprofen sezinja ngokobunzima
Yintoni elungileyo ye-turmeric?
uprinta njani amanqaku kwi-PowerPoint
negazi lakho ukuba juvederm